पोखरामा संगम कप फुटवल प्रतियोगिता सुरु – Khel Dainik
शनिबार देखि पोखरामा छैटौ संस्करणको संगम कप फुटवल प्रतियोगिता २०७४ सुरु भएको छ । पोखरा रंगशालामा भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा हेमजा युनाईटेड क्लवले विजयी सुरुवात गरेको छ ।
पोखराको संगम बे आयोजनामा सुरु भएको उद्घाटन खेलमा हेमजाले काजिपोखरी एफ.सी.लाई ४–१ को गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । हेमजाको जितमा ईश्वर नेपालीले दुई, सुमन सुनार र अस्मित कुवंरले एक एक गोल गरेका हुन। खेलको ३४ औं मिनेटमा सुनारले हेमजाको लागि पहिलो गोल गरे । पहिलो हापमा १–० ले पछि परेको काजीपोखरीले दोश्रो खेलमा आफ्नो खेलको लय पच्छ्याउन नसक्दा हेमजासंग पहिलो खेलबाटै बाहिरिनु परेको हो । खेलको ५१ औं मिनेटमा काजिपोखरीका हेमन्त तामाड्डले एक गोल गरी खेल बराबरीमा पुर्याए पनि तामाङले गोल गरेको ४ मिनेट अर्थात ५५ औं मिनेटमा अस्मित कुवंरले गोल गरी २–१ को अग्रता दिलाए । खेलको ५६ औं मिनेटमा ईश्वर नेपालीले एक गोल गरी जित सुनिस्चित पारे भने खेलको ६७ मिनेटमा पुनः एक गोल गरी गोल अन्तर फराकीलो पारे ।
त्यसै गरी दोश्रो खेलमा आर.टि. सेन्टर विजयी भएको छ । आर..टी.ले हिल प्वाईन्ट स्कुलको टोलीलाई २–० ले परााजित गर्यो । आर.टि. सेन्टरको जितमा खेलको पाचौं मिनेटमा सौगात राना र खेलको ४८ औं मिनेटमा प्रदिप परियारले एक एक गोल गरे । भोलि आइतबार पहिलो चरणकै ४ वटा खेल हुने भएको क्लवका सदस्य धिरज तामाड्डले बताए ।
पुष ७ गतेसम्म पोखरामा संचालन हुने उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष दर्शन लामाले रेफ्रि सन्तोस गुरुड्डलाई वल हस्तान्तरण गरी गरे । कार्यक्रममा बोल्दै उनले युवाहरुलाइ खेलकुदमा आवद्ध गर्न पनि यस्ता प्रतियोगिता निरन्तर गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोगको लागि आफुहरु तयार भएको जनाए ।
प्रतियागितामा विभागिय एक टोली सशस्त्र प्रहरी वलको एपिएफ सहित २३ टिमको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगितामा विजेतालाई एक लाख २५ हजार, उपविजेतालाई ६५ हजार नगद सहित ट्रफी, मेडल, प्रमाण–पत्र वितरण गरिने भएको छ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई ७ हजार, प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट डिफेन्स र उत्कृष्ट स्टाईकरलाई जनहि ५÷५ हजार पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ ।
प्रतियोगितालाई सफल पार्न जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय खेलकुद विकास समिति, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयको, सहयोग गरेको सचिव शिव नेपालीले बताए ।
← मार्सल आर्ट च्याम्पियनसिपमा जीवनलाई स्वर्ण फाइनल : नेपालद्वारा सिंगापुरलाई १८४ रनको लक्ष्य →